Ku soo dhawow RTFL – Xaquuqda nolol buuxda | RTFL Care
Hem › Languages › Somali
Ku soo dhawow RTFL – Xaquuqda nolol buuxda
Ku soo dhawow RTFL – Xaquuqda nolol buuxda. Waxaanu nahay shirkad gargaar oo soo dhaweyn wacan iyadoo aamu macaamiishayada ka caawino sidii ay u hanan lahaayeen nolol buuxda iyadoo aan kartidooda laxaadka, maskaxda iyo luqada toona loo eegayn. Waxaanu leenahay khibrad dheer oo daryeelka iyo xanaaneynta ah – kaas oo ku salaysan ahmiyad dhab ah oo lagu maamulaayo kalkaaliyahaaga shakhsiga si kor u qaadeysa tayada noloshaada iyadoo ku siinaysa fursado cusub oo aad ku suurto galinayso hamigaaga.
Gargaaraha shakhsiga ahi waa xuquuq dalkan Iswiidhan kaas oo dhamaan muwaadiniinta siiya xuquuqda ay ku noolaanayaan nolol buuxda, iyadoon awoodooda laxaadka loo eegayn. Maaha mid dhib yar in xuquuqdan la hantiyo, khaasatan dadka aan luqada iyo dhaqanka dawlada aqoon. Xataa hadii aad af-iswiidhishka ku hadasho ayay kugu adkaan kartaa inaad fahanto luqada iyo dhaqan biyookraatiyada dawlada.
RTFL waxay ilaa bilowgii 2001 qoysas badan ka caawisay sidii ay u kasban lahaayeen xuquuqdooda. Dhacdo kastaa waa mid gooni ah iyadoonu aaminsan nahay in macaamiishu ay garanayaan sida iyaga nolol buuxda u helayaan. RTFL waxay leedahay fikir adeeg oo balaadhan iyadoo aan adeegeeda ku koobeyn aqoonta shuruucda, turjumaad iyo maamulid. Waxaanu kale oonu kaa caawinaynaa wixii yar ama weyn ee dhibaatooyinka shakhsiga ah ee macaamiishayada ka hor istaagaaya inay nolol buuxda helaan. Waxa ka mid ah xanaaneynta, aadida dugsiga, guryaha iyo shaqada. Waxaanu isbadel ku sameynay nolosha qaar badan oo macaamiishayada ah.
RTFL waxay maanta haystaa ilaa 50 macaamiil. Xidhiidhkaya aanu macaamiisha la leenayahy waxuu ku dhisan yahay is aamin, is ixtiraam iyo adeeg. Aaminaada salka dheer ee xuquuqda sinaanta binuaadamka ayaanu ka shidaal qaadaneynaa sidaanu ugu shaqeyno inaad nolol buuxda hesho. Hadii aad xiiseynayso inaad na siiso aaminaadaa ayaad ku soo dhawaan doontaa inaad la xidhidho mid ka mid ah dadka ka shaqeey RTFL. Hadii aad aaminto RTFL ayaanu ku siin doonaa saameyn balaadhan ood ku heelato gargaarkaaga. Macaamiishayada ayaa mar kasta ah hadafkayaga. Waxaad go’aansanaysaa cid kuu noqon doonta gargaarahaaga shakhsiga iyo sida loo isticmaalaayo lacagta gargaarka. Waxa kale oo aad awood u heli kartaa gargaar cusub oo ku sabsan xanaaneynta, tabobarka iyo waxbarashada
Adeegyaga waxa ka mid ah:
Talo bixin sharciga oo lacag la’aan ah
Sameynta dalabka iyo racfaan ka qaadashada kaalmada gargaaraha
Maamulka shaqalaha iyo dhaqaalaha
Kaalmada la xidhiidhida dawlada iyo suurto galinta daryeelka
Wada hadalada horumarka iyo wax qeyb ka mid ah adeegyadayada qaabilsan daryeelka, dugsiyada iyo xanaaneynta
Isbadelka ku yimaada isku filaanshahaaga nolol maalmeedkaaga ee aad u baahato kaalmo maaha mid dhib yar, khaasatan markaad ku hadasho luqad kale oo aan aheyn af-iswiidhishka. Inaad caawimada saxa ah ka hesho dadka aad jeceshay ee aad aaminsan tahay ayaa aasaasi u ah tayada noloshaada. In la fahmo dhaqankaaga, luqadaada oo la ixtiraamo xuduudaada ayaanu u aragnaa inay ka mid tahay daryeelka wacan ee waayeelka. Waxaanu miisaameynaa danta guud markaanu wada jir adiga iyo qoyskaaga qorsheynayno xanaaneyntaada. Waxa anaga noo muhiim ah in shaqaaluhu uu haysto wakhtiga uu u baahan yahay si uu kuu caawiyo oo aanu isku galin istarees hawl qabadka. Waxa kale oo muhiim ah joogteynta habsocodka iyo badbaadada.
Shaqadayada waxa sal u ah baahidaada. RTFL waa shirkad yar u dhow macaamiidha taas oo aan gorgoortan ka galin tayada. Adigu waxaad mar kasta ka tahay qeyb shaqaaleynta shaqaalaha guriga kugu caaqinaaya. Malaha waxaad firkad ka haysaa qof aad jeceshay oo aad aaminsan tahay oo aad rabto inaanu shaqaaleyno. Waxaanu markaa sameyn doonaa baadhitaankii loo baahnaa oo aanu markaa interfiyuu ka qaadi doono. Hadii ay buuxinayaa shuruuda guud ee aan raadinayno ayaa la shaqaaleysiin doonaa si ay adi kuu caawiyaan. Sidoo kale waxaanu waayo aragnimo fiican ugu leenahay inaanu shaqaaleysiino iyadoonu haysano xidhiidh balaadhan oo shaqaale kuugu keeno isuna waafajino dalabkaaga. Is badbedelka iyo ixtiraamka ayaa ah hogaanka shaqadayada caawimdaada guriga.
Hadii aad xiiseynayso inaanu ku caawino adiga ama qof kuu dhow oo caawimada guriga raba ayaad ku soo dhawaan doontaa inaad nagala soo xidhiidho RTFL.
Hadii aad u baahan tahay taageero si aad u soo socsocoto, amaba aad booqato ama dalxiis aad tagto ayuu adega gacan qabashadu yahay hab si fiican u shaqeynaaya. Taas waxa xataa ku jira markaad doonayso inaad ka qeyb qaadato jimicsiga. Adeega gacan qabashadu waa adeg shakhsi ah oo markasta ku salaysan baahidaada. Ujeedaduna waa in aad hesho nolol ka tayo wanaagsan ood wax cusub aad aragto.
Si aad u hesho adeega gacan qabashada ee waafaqsan xeerka taageerada iyo adeega qaar ka mid ah dadka laxaadka la’ (LSS) waa inaad leedahay laxaad la’aan adinka ama maskaxd ah oo balaadhan taas oo dhibaato kuu keenaysa sidii nolol maalmeedkaaga u sameyn laheyd.
Komuunka ayay masuuliyad ka saaran tahay sidii uu kuu siin lahaa kaalmada ay curyaanimadaadu u baahan yihiin. Dalabka gacan qabashada waxaad ka saneynaysaa hay’ada adeeg bulshada ama maamulka degmada ee kamuunkaaga. Qof qiimeeya gargaarka ayaa ku soo booqan doona si uu u qiimeeyo baahidaada gargaarka. Hadii aad u baahan tahay in dalabka lagula buuxiyo ayay RTFL- kaa caawin doontaa taas.
Waxay RTFL maanta haysataa qaar badan oo gacan qabashada ah. Waxaanu ognahay in gacan qabashadu ay kor u qaado tayada nolosha hadii aad indho laada’ ay ama aad dhago laada’ ay. Waxaad kaloo qabi kartaa dhibaato koritaanka ah oo sababtey inaad u baahan tahay caawimo si aad si sugan u sameyso waxqabadka aad doonayso.